ဗမာ | School District of Lancaster
Home / Discover SDoL / Diversity / Languages / ဗမာ
Lancaster ၏ကျောင်းစာအုပ်ခရိုင်အများပြည်သူကျောင်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတိုင်းအဘယ်သူမျှမကုန်ကျမှာအများပြည်သူကျောင်းကိုသွားဖို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Lancaster ၏ကျောင်းခရိုင်မှာကလေးတစ်ဦးကျောင်းအပ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်သလဲ? သငျသညျကျောင်းများတွင်တွေ့မြင်လူများအပေါင်းတို့သည်အဘယ်သူနည်း သင်တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါကသို့မဟုတ်သင့်ကလေးကပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်လျှင်သင်ဖို့အဘယ်သူကိုပြောဆိုသလဲ? အဘယ်အရာကိုနှစ်အရွယ်မှာကလေးများကျောင်းက start နှင့်ကျောင်းတစ်ရက်ဘယ်လောက်ရှည်လျားပါသလဲ သင့်ကလေးကျောင်းပျက်ရမည်ဖြစ်သည်လျှင်အဘယ်သို့ပြုသနည်း ငါတို့သည်သင်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းတစ်ကျောင်းမှပြောင်းလဲကူညီရန်အဖြေတွေကိုနှင့်အရင်းအမြစ်များရှိသည်။
မူကြို: အသက်အရွယ် 4
မူလတန်းကျောင်း: ပဉ္စမတန်းမှတဆင့်အသက်အရွယ် 5
အလယျပိုငျးကျောင်း: အဆင့် 6-8
High School တွင်: အဆင့် 9-12
အမေရိကန်ကျောင်းမှာတစ်နှစ်သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းကစတင်ခဲ့သည်နှင့်ဇွန်လအစောပိုင်းအတွက်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းနှစ်အတွင်းကလေးများ၏သောကြာနေ့မှတဆင့်တနင်္လာနေ့ကျောင်းတက်။ ကလေးများစနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေကျောင်းမသွားကြပါဘူး။
ကျောင်းအတွက်လူတိုင်းကျောင်းသားများကိုပညာပေးအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, ဆရာများနှင့်ကျောင်းဝန်ထမ်းများ: ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ထက်အခြားတစ်ဦးပထမဦးဆုံးဘာသာစကားနှင့်အတူကျောင်းသားများကသူတို့ကျောင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်မှာပါဝင်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများသူတို့ ELD န်ဆောင်မှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကျောင်းအပ်၏အချိန်ကအကဲဖြတ်နေကြသည်။
Lancaster ၏ကျောင်းစာအုပ်ခရိုင်ဗဟိုစာရင်းသွင်းရန် PA ဆိုပြီး 17603. , 251 တောင်မင်းသားလမ်း, Lancaster မှာတည်ရှိပြီးကွိုဆိုရေးစင်တာမှာအားလုံးကျောင်းကအဆောက်အဦးများအတွက်ကြောငျးသားဆောင်ခဲ့ကျေးဇူးပြုပြီး: ကလေး၏အသက်သက်သေပြ, လိုအပ်သောကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်း၏သက်သေများနှင့်လိပ်စာအထောက်အထား။
ခငြ့်အရေး & တာဝန်များ
အမေရိကန်ကျောင်းစနစ်အတွက်ကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူမိဘတစ်ဦးအဖြစ်, သငျသညျအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားနှစ်ခုလုံးရှိသည်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့အောက်ကကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အင်္ဂလိပ်ထက်အခြားတစ်ဦးနေအိမ်ဘာသာစကားနှင့်အတူမိဘများသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူတို့၏နှစ်သက်သောဘာသာစကားမှာကျောင်းကသတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဘာသာစကားအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူန်ဆောင်မှုကိုတောင်းဆိုဖို့, ဒီပထမဦးစွာဘာသာစကားကိုသတ်မှတ်ခြင်း Card ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်, သင်၏ကျောင်းရဲ့အဓိကရုံးမှပစ္စုပ္ပန်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ, ကျောင်းသားများနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျောင်းသို့သွားကြဖို့လိုအပ်သည်။ ကျောင်းသားများကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်တစ်မိသားစုအရေးပေါ်ကျောင်းကလက်လွတ်ရမယ်ဆိုလျှင်, ရေးသားထားသောမှတ်စုမရှိခြင်း၏သုံးရက်အတွင်းကျောင်းမှထံသို့စေလွှတ်ရမည်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ပါကထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည် "ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သော။ " သိပ်အများကြီးဥပဒေမဲ့ပျက်ကွက်တရားရုံးပွဲသို့မ
ကျောင်းသားများ Pennsylvania ပြည်နယ်ကျောင်းများသို့တက်ရောက်ရန်နိုင်ရန်အတွက်အချို့သောကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိရန်လိုအပ်သည်။ အကြှနျုပျတို့သညျသငျလိုအရာ vaccines ကိုသိကူညီရန်နှင့်လိုအပ်ပါက, သင်၏သားသမီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပံ့ပိုးပေးတွေထဲကနေဖြင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
မူလစာမျက်နှာကို AT သင့်ကလေးကူညီထောက်ပံ့မှု
သငျသညျမိဘတစ်ဦးအဖြစ်, သင်သည်သင်၏ကလေး၏ဘာသာစကားနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုထောကျပံ့ကူညီပေးနိုင်သည်ကိုဘယ်လို, အံ့သြလိမ့်မည်။ အချို့မဟာဗျူဟာများအဘို့အောက်က link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သင့်ကလေးသင့်ရဲ့အကူအညီနှငျ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့အတူပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်!
Lancaster ၏ City နှင့်ကျောင်းခရိုင်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးရေး, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းနှင့်အတူကူညီပေးဖို့သင့်ကလေး၏ကျောင်းမှပြင်ပအရင်းအမြစ်များနံပါတ်ကိုဆက်ကပ်။ သငျသညျအကူညီရနိုင်နည်းလမ်းတွေများစာရင်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင် menu ကနေရွေးချယ်မိခင်ဘာသာစကားအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောစာမျက်နှာကြည့်ရှုနေကြသည်။ တစ်ခုလုံးကို site ကိုဘာသာပြန်ဆိုရန်, စာမျက်နှာ၏ထိပ်မှာ dropdown menu ကနေသင်နှစ်သက်တဲ့ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ။
(စက်တင်ဘာလ 1 ရက်နေ့တွင်သို့မဟုတ်မတိုင်မီ) အသက်အရွယ် 4
5 မှတဆင့်သူငယ်တန်း (အသက် 5) ကြိမ်မြောက် တန်း
အများစုမှာမူလတန်းကျောင်းများ 3:15 pm အချိန်မှာ 8:45 pm တွင်နှင့်အဆုံးမှာနေ့ရက်တိုင်းကိုစတင်
အများစုမှာအလယ်တန်းကျောင်းများ 7:45 pm မှာစတင်နှင့် 2:45 pm မှာအဆုံးသတ်
7:50 pm မှာစတင်နှင့် 3:00 pm မှာအဆုံးသတ်ထားသည်။
ဆရာ / န်ထမ်းအခန်းကဏ္ဍ
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကျောင်းသားများကိုသင်ပေးကြဘူး။ သူတို့ကကျောင်းတာဝန်ခံ၌ရှိကြ၏။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်:
ကျောင်းအုပ်ကြီး: ခရိုင်အတွင်းရှိတစ်ခုချင်းစီကိုကျောင်းကကျောင်းကြီးကြပ်သူတစ်ဦးကျောင်းအုပ်ကြီးရှိပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးဆရာ, ဆရာမ, ကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းသားများကို ” မိသားစုများဆက်သွယ်။
ဆရာ, ဆရာမစာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသားတွေကိုသင်ကြားပေးကြသည်။ ဆရာ, ဆရာမများစွာကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်:
စာသင်ခန်းဆရာများ: သူငယ်တန်းခုနှစ်တွင်5မှတဆင့် ကြိမ်မြောက် ကျောင်းသားများကိုများသောအားဖြင့်ကျောင်းတစ်ရက်အများစုအဘို့မိမိတို့စာသင်ခန်းဆရာမနှင့်အတူနေထိုင်ရန်တန်း။ စာသင်ခန်းဆရာမများသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောစာဖတ်ခြင်း, သင်္ချာ, လူမှုရေးလေ့လာမှုများ, နှင့်သိပ္ပံအဖြစ်အများအပြားကျောင်းမှဘာသာရပ်များ, သင်ပေးတယ်။
: အကြောင်းအရာဆရာများ အလယ်တန်းကျောင်းမှာတော့ (အဆင့် 6-8) နှင့်အထက်တန်းကျောင်း (အဆင့် 9-12), ကျောင်းသားများကိုထိုကဲ့သို့သောအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအနုပညာ, သင်္ချာ, သိပ္ပံ, လူမှုရေးလေ့လာမှုများ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး, အဖြစ်အထူးသဖြင့်အကြောင်းအရာဧရိယာ၌အထူးပြုတဲ့သူကွဲပြားခြားနားသောဆရာ, ဆရာမရှိသည် အနုပညာ, etc … ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (ELD) ဆရာ, ဆရာမ: ELD ဆရာများ Listening, Speaking, ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်စာအရေးအသားအတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသိအမြင်ဖွံ့ဖြိုးဖို့စာသင်ခန်းနဲ့ content ဆရာ, ဆရာမနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
အထူးပညာရေးဆရာ: အထူးပညာရေးဆရာများကွဲပြားခြားနားသောသင်ယူမှု, စိတ်ခံစားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များရှိသည်သောကျောင်းသားများအထောကျပံ့ပေး။
ကျောင်းအကြံပေး: ကျောင်းတိုင်ပင်မှူးမတ်အတန်းကိုရှေးခယျြနှင့်အချိန်ဇယားစေအဖြစ်၎င်းတို့၏, လူမှုရေးစိတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူကူညီပေးနေကူညီ, သူတို့ရဲ့ပညာရေးလျှောက်လုံးကျောင်းသားများကိုအကြံပြုသည်။ သူတို့ကအစသင်ကကျောင်းနှင့်ရပ်ရွာလူထုထောက်ခံမှုနှင့်အရင်းအမြစ်များအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက get ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
School တွင်သူနာပြု: အဆိုပါကျောင်းမှသူနာပြုနေမကောင်းဖြစ်ကြသည်သို့မဟုတ်ထိခိုက်စေတဲ့သူကျောင်းသားများကိုကူညီပေးသည်။
ကျောင်းနှင့်မိသားစုအရင်းအမြစ်အထူးကု (SFRS): ကျောင်းနှင့်မိသားစုအရင်းအမြစ်အထူးကု, လူမှုရေးအမျိုးမျိုးသောအပြုအမူများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူကျောင်းသားများနှင့်မိသားစုများကိုထောက်ပံ့။ သူတို့ကအိမ်တွေကိုသွားရောက်လည်ပတ်နှင့်ကျောင်းနှင့်ရပ်ရွာန်ဆောင်မှုမှမိသားစုများချိတ်ဆက်ပြီးထောက်ခံမှုနေအိမ် / ကျောင်းကဆက်သွယ်ရေးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကျောင်းစာအုပ်အရင်းအမြစ်အရာရှိချုပ် (SRO): SROs ကျောင်းကခိုင်ခိုင်လုံလုံအပေါ်ကျောင်းသားများကစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဝန်ထမ်းလုံခြုံကူညီသူကိုရဲအရာရှိများလေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။
အတွင်းရေးမှူး: အဆိုပါကျောင်းမှအတွင်းရေးမှူးအဓိကရုံးထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ဆရာ, ဆရာမနှင့်အတူမိသားစုများနှင့်ချိတ်ဆက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကအစသင့်ကလေးကျောင်းသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်၌တည်ရှိ၏သည့်အခါခြေရာခံစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။ သင့်ကလေးကျောင်းမဖွစျပါမညျလျှင်သင်ကျောင်းအတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ်တက်ရောက်သူရုံးကိုဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
တာဝန်များ vs မိဘများခငြ့်အရေး
သင့်ကလေး၏ကျောင်းကအလုပ်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဆရာ, ဆရာမနှင့်အတူဖြည့်ဆည်း
သင့်ကလေးကိုတစ်ခက်အချိန်ကိုမြင်လျှင်ရှိပါတယ်လျှင်, အကူအညီတောင်းကျောင်းမေးပါကွားလြှငျ, သို့မဟုတ်ကျောင်းအတွက်လေ့လာသင်ယူ
သင်တို့အဘို့အ Response နေသောခေါင်းစဉ်:
သူတို့နေမကောင်းဖြစ်ကြသည် မှလွဲ. နေ့တိုင်း, သေချာသင့်ကလေးကိုအချိန်ပေါ်ကျောင်းကိုဝင်အောင်
Making သေချာသင့်ကလေးသည်စင်ကြယ်၏ အောင်ကျွေး; သန့်ရှင်းသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်, ကောင်းစွာအိပ်။
သူတို့က hit သို့မဟုတ်မတိုက်ပါဘူး။
သငျသညျမိဘတစ်ဦးအဖြစ်, သင်သည်သင်၏ကလေး၏ဘာသာစကားနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုထောကျပံ့ကူညီပေးနိုင်သည်ကိုဘယ်လို, အံ့သြလိမ့်မည်။ ဤတွင်အချို့မဟာဗျူဟာများနေသောခေါင်းစဉ်:
စိတ်ရှည်ပါ။ ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူခြင်းရှုပ်ထွေးပြီး, ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြောင်းနားလည်ပါသည်။
အတွက်သင့်ကလေးနှင့်အတူ Read မဆို အင်္ဂလိပ်လိုစာတတ်မြောက်ရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးကူညီမည်နေအိမ်ဘာသာစကားမှာစာတတ်မြောက်ရေး။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Ed က / စာတတ်မြောက်ရေးကောင်စီ